Safiirkii Hore ee Mareykanka ujoogay Soomaaliya oo si kulul uga Hadlay Xaalada Soomaaliya.
Safiirki hore ee Mareykanka u fadhiyey Soomaaliya, Stephen Schwartz, oo ka hadlayey go’aanka ka bixinta ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ee dhawaan la dhaqan galiyey ayaa talasoojeedin uu sameynayey xukuumadda cusub ee Joo Baydhan ku soo hadal qaaday arima dhowr ah oo la xiriira la dagaalanka Al-shabaab , Hoggaaminta Farmaajo, Xiriirka Dowlad Goboleedyada, arimaha Doorashooyinka Soomaaliya.
La Dagaalanka Al-shabaab
Ambassador Stephen Schwartz ayaa ku nuuxnuusaday sida Al-shabaab ey khatarta ugu yihiin nabad-geliyada dalka, gobolka iyo danaha Mareykanka ee geeska Afrika. Waxa uu sheegay in tan iyo 2010 kii ey Al-shabaab galaafteen nolosha 4,500 oo rayid ah. Waxaa kale oo uu sheegay in kooxdan ku abtirsata ururka Al-Qacida ey khatar ku yihiin nabad galyada marinka baabul-mandab kaas oo nabad-geliyadiisu ey muhiim u tahay danaha Mareykanka ee geeska Afrika kaas oo ay quwadaha kale durba bilaabeen in ey galaan-galkooda ku xoojiyaan. Waxa uu Ambassador Schwartz tusaale u soo qaatay Shiina oo Saldhig Malatari ka sameystay Jabuuti halkaas oo xarun u ah taliska Afrik ee Mareykanka ee loo yaqaano Africom horena ugu sugnaayeen quwado kale oo uu ka mid yahay Faransiiska. Waxaa kale oo uu xusay in Imaaraatka Carabta oo hamineysa in ey dhisato Saldhig la mida kan ey Turkidu Soomaaliya ka sameysatay.
Arimahan oo dhan ayuu ku sababeeyey in joogista ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya aanay kaliya muhiim u aheyn la dagaalanka Al-shabaab balse sidoo kale ey lagama maarmaan u tahay ka qeyb ahaanshiyaha iyo dheelitirka awoodaha ku sugan Gobalka, isagoo sheegay in dhaqse ula bixista ciidanka ey saameyn ku yeelan doonto wadashaqeynta mudada dheer ee Mareykanka la leeyahay Soomaaliya.
Xiriirka Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad-goboleedyada
Safiirki hore ee Mareykanka ayaa aad u dhaliilay hoggaaminta Madaxweyne Farmaajo isaga oo ku eedeeyey in uu ku fashilmay mideynta iyo nabadeynta Soomaaliya. Waxa uu Ambassador Schwartz ka warbixiyey Xiriirka DFS iyo Dowlad-goboleedyada, isaga oo sheegay in Farmaajo ka dhigay Dowlad-goboleedyada kuwo isaga taabacsan iyo kuwa uu takooro. Waxa uu hoosta ka xariiqay in ey tani sababtay wadashaqeyn la’aan keentay in laga gaabiyo howlo badan oo muhiim u ah dowlad dhisida sida dhameystirka iyo ansixinta dastuurka, wadashaqeynta amniga iyo wadahadallada Soomaalilaan
Ambaasadoor Schwartz ayaa sheegay in hannaanka Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha ee loo balansanyahay iney kala dhacaan Bilaha Feberaayo iyo Maarso ee 2021 uu ahaa mid muran badan oo daahay. Tobaneeyo Musharax la tartamayo Farmaajo ayaa ku hanjanabay iney qabanayaan hannaan doorasho oo garab socod doona. Waxa ey dalbanayaan in gudiga doorashada laga saaro shaqaalaha rayidka iyo xubnaha NISA.
Waxa uu Ambassador ka sheegay in mustabalka siyaasadeed ee Soomaaliya uu ku xirnaan doono sida ey Hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta u aqbalaan natiijada doorashada. Waxa uu Madaxweynaha cusub Joo Baydhan u soo jeediyey in isha lagu haayo doorashada Soomaaliya lagun dadaallo sidii hannaan hufan dalka uga dhici laheyd.
Ambassador Schwartz ayaa ugu kale u soo jeediyey Soomaalida in ey ku dadaalaan dowlad wanaagga, dhameystirka Sharciyada aasaasiga ah iyo dhismaha iyo xoojinya CXD Soomaaiyeed.
« Maamulka Gobalka Banaadir oo La wareegaya Adeega Caafimaadka ee Caasimadda.
Doorashada Aqalka sare oo Mar Labaad dib u dhacday. »